Fri, Jun 22, 2018 | 01:28:13 NST
16:32 PM ( 1 year ago )
डाक्टर शम्भु दत्त जोशी –
होलीमा अनुहारभरी धेरैथरीका रंग पोतेर हिँड्न, एक आपसमा रंग लगाउन, पानीमा भिजेर रमाइलो गर्न कसलाई मन नपर्ला र ? तर मनोरञ्जनका लागि मनाइने यो पर्व मनाउन जानेन भने खुुशी भन्दा दुःख धेरै झेल्नु पर्छ । भनाई नै छ नि रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु बेश । त्यसैले होली खेल्ने तयारी गरिरहँदा सुरक्षाका उपायहरुको पनि पूर्व तयारी गर्न उत्तिकै जरुरी छ ।
होलीमा खेलिने रंगले शरीरको सबै भागमा भन्दा बढी असर गर्ने ठाउँ भनेको छाला हो । सँगै नङ र कपालमा पनि यसले असर गर्छ । अझ रंग लगाउँदा आँखामा पर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले होली खेल्नलाई पानी, रंग र खानेकुराको व्यवस्था सँगैै शरीर ढाक्ने पूरा कपडा, आँखामा कालो चस्मा, टाउकोमा टोपी, छालाको लागि मोइस्चराइजिङ क्रिम र सनब्लक एसपीएफ ३० भन्दा माथिको क्रिम, कपालको लागि तोरी, नरिवल तथा जैतुनको तेलको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
रंगमा सिसा मिसिएको हुन सक्छ
पहिले पहिले भन्दा अहिलेका रंगमा गुणस्तरको प्र्रश्न राख्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै कुनै रंगमा सिसा मिसिएको हुनसक्छ, जो बालबालिकाको छालाको लागि एकदमै हानिकारक हुन्छ । सँगै रसायन मिसिएको स्प्रे रंगहरु हुन्छन् । यस्ता रंग छालामा पर्दा छाला फुट्ने, डन्डिफोर आउने, छाला फुस्रो हुने, चिलाउने, डाबर आउने, घाँटी बस्ने, आँखा रातो हुने समस्या आउन सक्छ । त्यसैले रंगको छनौटमा ध्यान दिनुपर्छ । लगाउने बेलामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
रंग कसरी निकाल्ने ?
छालामा केमिकल रंग लगाएका छौं भने हामी त्यसलाई तुरुन्त निकाल्नको लागि मट्टितेल, पेट्रोलको प्रयोग गर्छौं । तर यो छालाको लागि धेरै हानिकारक हुन्छ । कपालमा लागेको रंग निकाल्दा मन तातो पानीमा कन्डिस्नर लगाएर धुने र तेलले मालिस गर्नुपर्छ । छालाको लागि सेता साबुन र मन तातो पानीले सफा गर्नुपर्छ । नङलाई पनि नरम ब्रसले सफा गर्ने र तेलले मालिस गर्ने गर्नुपर्छ ।
होलीमा रंग लगाएपछि दुई तीन दिनसम्म दाह्री काट्ने, थ्रेडिङ तथा फेसियल गर्नु हुँदैन । यो बेलामा छाला कमजोर भएको हुन्छ र यस्ता क्रियाकलापले छाला फुट्ने हुनसक्छ । कुनै बेला छालामा रंगको कारणले डाबर आउने, चिलाइरहने तथा फोका देखा पर्न सक्छ । घाममा जाँदा चर्याउने, परपराउने भएमा डाक्टरकोमा जानु पर्छ ।
(वरिष्ठ छाला रोग तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर जोशीसँग सुजाता खत्रीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)